Ny Soisa Federaly misahana ny Raharaham-bahiny (FDFA) - Alemaina mpisolovava an-tserasera. Ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Ny Soisa Federaly misahana ny Raharaham-bahiny (FDFA)
Dia mihaona isan-kerinandro sy ny Fanapahan-kevitra
Fito ny Sampan-draharaha doha ny atitany sy ny Sampan-draharaha lohany mandrafitra ny Filankevitra Federaly. Ny"Chancelier"manohana ny governemantaNy Federaly Filan-kevitra, mitarika, Soisa, no mitarika amin'ny fitantanana, dia nanolo-kevitra ny lalàna, ary feno kosa dia misarika.
Rehetra ny anarana mihoatra ny zato Federaly ireo mpanolotsaina Federaly sy ny mpanolo-tsaina.
Ny antoko, ny cantonal sy ny firehana ara-pitenenana, milaza ny tantaran ny concordance.
Tahiry ofisialy Federaly Filan-kevitry ny sary ny nentim-paharazana, isan-taona ny sekoly diany, ny kabary ny Federaly Filohan ny fetim-pirenena sy ny taona vaovao. Ny Federaly Filan-kevitra mahatonga ny Fanapahan-kevitra amin'ny fivoriana, amin'ny isan-kerinandro Federaly Filankevi - Federaly fivorian'ny Filankevitry ny efitrano. Ny fandaharana ara-politika ho an'ny mpanao lalàna - misy fito ambin'ny folo Tanjona ny mba hampandrosoana ny fampandrosoana, ny Firaisan-kina sy ny fiarovana. Ny Filankevitra Federaly dia voafidy amin'ny alalan'ny Soisa Parlemanta.
Ny fifidianana dia hatao isaky ny efatra taona tamin'ny volana desambra.
Ueli Maurer teraka tamin'ny. Desambra amin'ny taona ny Filoha Federaly ho an'ny taona voafidy. Ny Federaly Filoha na ny Filoha Federaly tao an-taona ny birao andraikitra manokana - na ao amin'ny fiaraha-miasa ao anatin'ny governemanta, ary koa ny solontena ho any ivelany. Satria ny mpanorina ny fanjakana Federaly tamin'ny, dia niova ny birao Federaly Filoha fotoana maro be. Be izay heverina ankehitriny ho toy ny zavatra mazava ho azy, dia ampiasaina ho tsy mety. Walter Thurnherr (CVP) no mitarika ny Federaly Chancellery satria. Ny"Chancelier"manohana sy manoro hevitra ny governemanta. Ny Federaly Chancellery dia ny mpiasa biraon'ny Filankevitra Federaly, ary manana ny asa ny hinge teo amin'ny governemanta, fitantanan-draharaha, ny Antenimiera sy ny Vahoaka. Fikarohana ary koa ny farany ny fanontana ny Federaly-taratasy, ny Ofisialy ny famoriam-bola, ary maika boky sy gazety.
Mivaingana dikan ny lalàna Federaly sy ny Lalàna iraisam-pirenena, nanao araka ny toko sy ny foto-kevitra.
Hafatra sy ny tatitra momba ny Federaly sy ny Filan-kevitry ny Parlemanta, referenda ary manamarika ny Birao sy ny fitsarana. Isaky ny Federaly Filan-kevitry ny fihaonana dia eo amin'ny Fanapahan-kevitra.
Velona ny fampielezam-peo sy tahiry ny haino aman-jery ny fihaonambe ny Filankevitra Federaly.
Ny fifandraisana rehetra avy amin'ny departemanta sy Birao.
Izany hoe, taorian'ny, ny taona faharoa ho Filoha
Izany dia mety ho amin'ny alalan'ny mailaka na amin'ny maha-RSS mifototra amin'ny ny famandrihana. Ny Olona tsirairay dia manana zo fototry ny fahafahana hahazo ny tahirin-kevitra ofisialy avy amin'ny fitondrana Federaly-panjakana. Miresaka ny fangatahana ho an'ny fanaraha-maso. Ny fidirana amin'ny fianarana ambony, izay efa napetraky ny Federaly amin'ny any ivelany ny manam-pahaizana. Lisitry ny mpiantoka, ny Tale sy ny vola lany. Ao amin'ny Online Shop, 'Federaly boky sy gazety' dia afaka manondro ny boky rehetra, ny departemanta, ny Federaly Chancellery sy ny Filankevitra Federaly. Ny Federaly misahana ny Raharaham-bahiny (FDFA), dia maneho Soisa any ivelany. Izany no mitantana hatramin'ny volana novambra Ignazio Cassis. Ignazio Cassis dia amin'ny. Aprily teraka Tamin'ny taona, dia vita ny fianarana ho dokotera ao amin'ny Oniversiten'i Zurich.
Tamin'ny taona, dia nandray ny Oniversiten'i Geneva, ny diplaoma eo amin'ny fitsaboana.
Tamin'ny taona, dia vita ny fanofanana ho toy ny manam-pahaizana manokana ho an'ny Anatiny fanafody, ary koa ho an'ny fisorohana sy ny fahasalamam-bahoaka. Izy dia nanompo avy - ny mpitsabo. Avy - izy cantonal dokotera fa ny Canton Ticino. Teo anelanelan'ny taona sy, dia natao an-toerana ny Filoha Lefitry ny Soisa Mpitsabo (FMH). Izy no mpampianatra ao amin'ny isan-karazany ny oniversite ao Soisa. Nijoro teo amin'ny lohany ny Fikambanana CURAVIVA (trano sy ny andrim-panjakana Soisa), ny"Association ny zava-baovao ara-pahasalamana mpiantoka". Tamin'ny taona, Ignazio Cassis dia voafidy ho toy ny solontenan'ny Ticino FDP ao amin'ny Filan-kevi-pirenena. Hatramin'ny, izy no Filohan ny FDP liberaly vondrona ao amin'ny Federaly Antenimiera. Hatramin'ny, dia tsy maintsy ny Ny Biraon'ny Filan-kevi-pirenena ny Vaomiera ho an'ny fiahiana ara-tsosialy sy ara-pahasalamana (SGK). Septambra voafidy noho ny United Federaly Antenimieram-Ignazio Cassis ao amin'ny Filankevitra Federaly. Hatramin'ny Novambra, izy dia miandraikitra ny Sampan-draharaha Federaly misahana ny Raharaham-bahiny. Ny FDFA fiarovana Soisa ny zavatra mahaliana avy any ivelany, sy mampihatra ny politika ivelany tetika ny Filankevitra Federaly. Manokana ny lanja ny Federaly Filan-kevitra momba ny fikojakojana sy ny Fampandrosoana ny fifandraisana amin'ireo firenena mifanolo-bodirindrina, ary amin'ny vondrona EOROPEANA. Amin'ny teknolojia maoderina, ny EDA koa hanao ny asa ho an'ny Soisa Soisa à jour, ary hanohy ny hanatsara.
Ny fananana ny olona ara-dalàna: amin'ny maha-niforona, izay no nafindra
Senarai pertikaian wilayah